Safiirkii DF ee Talyaaniga oo soo saaray qoraal xasaasi ah oo jawaab u ah Cabdisaciid - Caasimada Online
Home Warar Safiirkii DF ee Talyaaniga oo soo saaray qoraal xasaasi ah oo jawaab...
Safiirkii DF ee Talyaaniga oo soo saaray qoraal xasaasi ah oo jawaab u ah Cabdisaciid
Muqdisho (Caasimada Online) – Safiirkii Safaradda Soomaaliya ee dalka Talyaaniga Cabdiraxmaan Sheekh Ciise ayaa soo saaray war-saxaafadeed uu ku sharaxayo sababta uu ku yimid khilaafka u dhaxeeya asaga iyo wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali, oo sheegay inuu xilka ka qaaday, wuxuuna Safiirku eedeymo culus u soo jeediyey wasiirka.
Hoos ka akhriso war-saxaafadeedka Danjire Cabdiraxmaan Sheekh Ciise
Waxaan warbaahinta maxaliga ee dalka Soomaliya ka akhristay War-Saxaafadeed ay Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga (WADIC) J.F.S. soo saartay 1da May 2022 oo ay ku cambaareynayeen Danjire Cabdiraxmaan Sheikh Ciise, Safiirka Ambabaxaya (Out-going Ambassador) ee Safaaradda Soomaaliya ee fadhigeedu yahay Rome ee dalka Talyaaniga.
Waxaa nasiib darro ah in War-Saxaafadeedka Wasaaradda, oo dabcan lagu soo saaray amarka Wasiirka, Mdn. Cabdisaciid Muuse Cali, lagu dafiray in War saxaafadeedkaasi lagu xusi waayo dhacdadii foosha-xumayd ee sumcadda Qaranka Soomaaliyeed meel looga dhacay. Waxaa xaqiiqo ah in xoog kula wareegidda Safaaradda uu dhacay habeenimada 7da April, 2022, waxaana hormuud ka ahaa Sii-Hayaha Safaaradda Magacaaban (The Designated Charge Affairs) Mdn. Axmed Cabdiraxmaan Sheikh Nuur, isagoo kaashanaaya seddax diblomasiyiin kale.
Waxa aroornimada April 8, 2022 ay beddeleen furooyinka xafiisyada safaaradda, waxayna hore u qaateena furooyinka Baabuurta Safaaradda lahayd. Waxaa kaloo xaqiiqo dhab ah in anigoo ah safiirkii hore ee Safaradda Talyaaniga aanay jirin meel aan xilkii safaaradda si rasmi ah ugu wareejiyay Mdn. Axmed Cabdiraxmaan Sheikh Nuur. Arrintaas oo wali taagan waxeyna caddayn u tahay in safaaradda sifo aan sharci ahayn loola wareegay eraybixinti la doono haloo fasirtee (inqilab, xoog kula wareegid, iwm).
Isla markii ay sidaasi wax u dhaceen, waxaan warbixin qoraal ah u diyaariyay una diray Wasiirka Arrimaha Dibadda, Wasiir-Ku-xigenka iyo Wasiiru-Dowlahaba, Ogeysiisna u siiyay Madaxweynaha iyo Ra’isul wasaaraha JFS. (Eeg warqadda Sumadeedu tahay Prot: SER/I/50/2022 ee April 11, 2022,)
1 Waxaa kalo xusid mudan, in habeenimada 13-ka April 2022 inuu Madaxweynaha JFS, Mdn. Maxamed Cabdulaahi Maxamed uu ila soo xiriiray isagoo muujiyay in uu aad ula fajacay sida ay wax u dhaceen iyo isbeddelka Safaradda lagu sameeyay. Wuxuuna igu yiri “Waa arrin fool-xun dib ayaa lagaala soo xiriiri doonaa”. Wax yar kadib, waxaa teleefoon igu soo wacay Wasiir Cabdisaciid Muuse oo markale si faahfaahsan aan sharaxaad waafi ah uga siiyay nuxurka warbixintii qoraalka aan horay ugu diray taariikhda April 11, 2022, haseyeeshee uu doorbiday in aanu ka soo jawaabin arrinta la xiriirta Xoog kula wareegidda safaaradda.
2 Arrinta ku sabsan ku takrifal awoodeed iyo maamulka safaaradda waa wax kama jiraan. Shantii sano iyo bar oon Safaaradda Rome aan mas’uul ka ahaa, kama dhicin wax dhaliil ah, waxaana isoo martay shan Wasiir Arrimo Dibadeed. Sidaas darteed, arrinta uu wasiirka hadda lasoo booday waa wax kama jiraan. Waxaase looga fadhiyaa inuu Wasiirku uu marag-muujin cad inuu kasoo bandhigo. Haseyeeshee, maamulka u bahan in la saxo waa dhibta ka taagan Wasaaradda oo ugu horeyso xulashada iyo magacaabidda diblomaasiyiinta, taasoo Wasaaradda ay ka gaabisay inay mudnaanta siiso aqoonta guud iyo midda xirfadeedka shaqsiga, kartida, waayo aragnimada iyo hufnaanta shaqsiga.